उपाधिका लागी अष्ट्रेलिया र भारत भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ? - Nepal's Digital News Paper
उपाधिका लागी अष्ट्रेलिया र भारत भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ?
एजेन्सि । इंग्ल्यान्ड र वेल्समा जारी एक दिवसिय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आईतबार उपाधिका प्रमुख दुई दाबेदार राष्ट्र भारत र अष्ट्रेलिया भिड्दै छन् । खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो ३:१५ पछि लन्डन स्थित ओभल क्रिकेट मैदानमा सुरु हुने छ ।
केनिङटन ओभलमा मैदान उत्रदा दुवै टोली जित निकाल्दै आफ्नो जितको यात्रा कायम राख्न चाहन्छ । दुवै टिम जित निकाल्दै आफुलाई उपाधि दाबेदार प्रमाणित गर्न चाहन्छ । अघिल्ला दुई खेल जितेको अष्ट्रेलिया लगातार तेस्रो जितको योजनामा हुनेछन् । जसका लागि अष्ट्रेलिया भारतलाई शिकार बनाउन चाहन्छ ।
अष्ट्रेलियाले २ खेलबाट ४ अंक जोडेको छ । र, तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ । अष्ट्रेलियाले पहिलो खेलमा अफगानिस्तान र दोस्रोमा वेष्ट इण्डिजलाई हराएको थियो । यता, भारत लगातार दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ । पहिलो खेलमा दक्षिण अफ्रीकालाई हराएको भारत अष्ट्रेलियालाई पनि स्तब्ध बनाउने योजनामा मैदान उत्रने छ ।
भारतले १ खेलबाट २ अंक जोडेको छ । तर, अष्ट्रेलियाविरुद्ध मैदान उत्रदा भारत निकै सजग भने हुनेछ । दुई टोलीबीचको पछिल्ला नतिजा अष्ट्रेलियाको पक्षमा रहेको छ । पछिल्लो ५ भेटमा अष्ट्रेलियाले ३ खेल जितेको छ । भारतले २ खेलमा जित निकालेको छ ।
पछिल्लो तीन खेलमा अष्ट्रेलियालाई भारतले हराउन सकेको छैन ।